युसूफ सिमिक लेप्चा बोर्डका उपाध्यक्ष पदबाट निष्कासित – खबरम्यागजिन
Homeखबरकालेबुङयुसूफ सिमिक लेप्चा बोर्डका उपाध्यक्ष पदबाट निष्कासित
April 30, 2017 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि कालेबुङ, खबर 0
जाप र राज्यमाझको सम्बन्धमा फाटो?
मलाई एकतर्फ विकास बोर्ड अनि अर्कोतर्फ पार्टीको काम गर्दा धेरै असुविधा भइरहेको थियो। तर अब मैले पार्टीलाई पूर्ण समय दिने मौका पाउने भएको छु र अलग राज्यको मागमा अघि बढ्नेछु। जनआन्दोलन पार्टीको मूल मागनै छुट्टै राज्य हो, यसैको लागि अब म कार्य गर्नेछु।
राज्य सरकारले पश्चिम बंगाल मायाल ल्याङ लेप्चा विकास बोर्डका उपाध्यक्ष युसूफ सिमिकलाई बोर्डको उपाध्यक्षबाट निष्कासित गर्यो। 28 अप्रेलको दिन राज्यका मुख्य सचिवद्वारा जारी गरिएको अधिसूचनामा सिमिकलाई लेप्चा विकास बोर्डको उपाध्यक्ष पदबाट हटाइएको अवगत गराइएको छ भने यसका प्रतिलिपिहरु कालेबुङका जिल्लापाल, लेप्चा विकास बोर्डका अध्यक्षका साथै बोर्डका सचिवलाई पनि पठाइएको छ। युसूफ सिमिकलाई लेप्चा विकास बोर्डको उपाध्यक्ष पदबाट हटाइएको सम्बन्धमा अधिसूचनामा विस्तृत विवरण नदिइए पनि उनलाई राजनैतिक कारणनै यस पदबाट हटाइएको अनुमान लगाइएको छ। यसबारे सिमिकसित सम्पर्क गर्दा उनले आज आफूलाई लेप्चा बोर्डका उपाध्यक्ष पदबाट हटाइएको पत्र प्राप्त भएको बताउँदै मलाई के कारणनै हटाइयो, यसबारे केही स्पष्ट नभएको पनि बताए। तरै पनि उनले आफूलाई राजनैतिक कारण हटाइएको हो भने यसलाई सहस्र स्वीकार गर्दै अब पार्टी र छुट्टै राज्यको लागि खुलेर खट्ने समय पाउने भएको पनि बताए।
उनले भने-हुन ता मलाई एकतर्फ विकास बोर्ड अनि अर्कोतर्फ पार्टीको काम गर्दा धेरै असुविधा भइरहेको थियो। तर अब मैले पार्टीलाई पूर्ण समय दिने मौका पाउने भएको छु र अलग राज्यको मागमा अघि बढ्नेछु। जनआन्दोलन पार्टीको मूल मागनै छुट्टै राज्य हो, यसैको लागि अब म कार्य गर्नेछु। यसका साथै उनले जनआन्दोलन पार्टीलाई तृणमूल कंग्रेसको बी टीम हो भन्ने आरोप पनि आज पूर्णरूपले गलत प्रमाणित भएको बताउँदै अघि भने-जनआन्दोलन पार्टीलाई पहाड़को विपक्षी पार्टीहरुले तृणमूल कंग्रेसको बी टीम, बंगालको एजेन्ट हो भन्ने आरोप लगाउँदै आइरहेका छन्। तर मलाई त्यसै बंगाल सरकारले लेप्चा विकास बोर्डको उपाध्यक्ष पदबाट हटाएपछि कुरा स्पष्ट भएको छ।
यसरीनै जनआन्दोलन पार्टीका अध्यक्ष डा. हर्कबहादुर छेत्रीसित युसूफ सिमिकलाई विकास बोर्डको उपाध्यक्ष पदबाट हटाइएको सम्बन्धमा सोध्दा उनले भने-यसबारे मलाई त्यति राम्रो थाह छैन अनि अनुमानमा यसमाथि टिप्पणी गर्न पनि मिल्दैन। यसैले यो विषय सिमिक र राज्य सरकारमाझको हो र यसमाथि सिमिकलेनै राम्ररी उत्तर दिन सक्नेछन्।
स्मरण गराइन्छ, युसूफ सिमिक डा. हर्कबहादुर छेत्री नेतृत्वावधीन जनआन्दोलन पार्टीका व्यूरो सदस्य हुन् अनि उनी यस पार्टीमा पार्टीको स्थापनाकालदेखिनै जड़ित छन्। यसअघिसम्म जनआन्दोलन पार्टी र राज्यको तृणमूल कंग्रेस सरकारमाझ असल सम्बन्ध थियो, यसैले राज्य सरकारले स्वयं जनआन्दोलन पार्टीका अध्यक्ष डा. हर्कबहादुर छेत्रीलाई उत्तर बंगाल विकास बोर्डका उपाध्यक्ष पद पनि दिएको थियो। यति मात्रै होइन, गत विधानसभा चुनाउको समय तृणमूल कंग्रेसले आफ्नो उम्मेद्वार सूचीमा कालेबुङबाट डा. हर्कबहादुर छेत्रीको नामसमेत उल्लेख गरेर सार्वजनिक गरेको थियो। तर जनआन्दोलन पार्टीको आपत्तिपछि राज्यको सत्तारूढ दल तृणमूल कंग्रेसले आफ्नो उम्मेद्वार सूचीबाट डा. हर्कबहादुर छेत्रीको नाम हटाएको थियो अनि डा. हर्कबहादुर छेत्रीले जनआन्दोलन पार्टीका उम्मेद्वार भएर चुनाउ लड़ेका थिए। यद्यपि, उक्त चुनाउमा तृणमूल कंग्रेसले दार्जीलिङ र खरसाङ विधानसभा आसनबाट आफ्नै उम्मेद्वार खड़ा गरे पनि कालेबुङ विधानसभा आसन डा. हर्कबहादुर छेत्रीको लागि खुल्ला राखिदिएको थियो।
त्यस समयसम्म तृणमूल कंग्रेस र जापको सम्बन्ध ठीकै थियो, तर नगरपालिका चुनाउ जति नजिक आउँदै गयो, उति यी दुइ पार्टी टाड़ो बन्दै गए अनि यसपालिको नगरपालिका चुनाउमा जापले पूर्णरूपले अलग भएर लड़्ने घोषणा गरी तृणमूल कंग्रेसलाई चुनौतीनै दिने कार्य गर्यो। जसको फलस्वरूप युसूफ सिमिकले लेप्चा विकास बोर्डको उपाध्यक्ष पद गुमाउन परेको अनुमान लगाइएको छ। यद्यपि, उनलाई राज्य सरकारले लेप्चा विकास बोर्डका उपाध्यक्ष पदबाट हटाएपछि राज्य र जनआन्दोलन पार्टीमाझको सम्बन्धमा पनि फाटो आएको स्पष्ट अनुमान लगाउन सकिन्छ।